USDP Swarn Arr Shins’ crimes against humanity မိတ္ထီလာမှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့အကြမ်းဖက်မှုနဲ့ ရခိုင်အရေးအခင်း အကြမ်းဖက်သတ်ဖြတ် မီးရှို့ခဲ့တာနဲ့ တစ်ပုံစံတည်းပါပဲ | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« Refugees in Nepal condemned to ‘hilly prison’ by visa fines
Burmese journalist beseeches brethren: Stop with the Muslim hate speech »
USDP Swarn Arr Shins’ crimes against humanity မိတ္ထီလာမှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့အကြမ်းဖက်မှုနဲ့ ရခိုင်အရေးအခင်း အကြမ်းဖက်သတ်ဖြတ် မီးရှို့ခဲ့တာနဲ့ တစ်ပုံစံတည်းပါပဲ
Who are the Terrorists (3)…USDP Swarn Arr Shins’ crimes against humanity.
The current situation in Meiktila is exactly the same as in Arakan’s. Killing Muslims, burning the Muslim homes and destroying Mosques are all the same. The criminals are the same also but only place is different.
မိတ္ထီလာမှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့အကြမ်းဖက်မှုနဲ့ ရခိုင်အရေးအခင်း အကြမ်းဖက်သတ်ဖြတ် မီးရှို့ခဲ့တာနဲ့ တစ်ပုံစံတည်းပါပဲ
မိတ္ထီလာမြို့မှ ရှဟီးဒ်ဖြစ်သွားတဲ့ အွမာသ်ညီနောင်များ (၃)
ယနေ့ ၂၀၁၄ ခုနှစ် မတ်လ (၂၀)ရက်နေ့သည် မိတ္ထီလာမြို့မှ ကျွန်တော်တို့ အွမာသ်ညီနောင်များအား သမ္မတဦးသိန်းစိန်အစိုးရအဖွဲ့ကိုယ်တိုင် ရက်ရက် စက်စက်သတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့နေ့ (၁)နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့ဖြစ်သဖြင့် ရှဟီးဒ်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ ညီနောင်များအတွက် အောက်မေ့ ၀မ်းနည်းဖွယ် အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့
ကျွန်တော့်  နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခဲ့တဲ့ပုံများကို တစ်ဖန် တင်ပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အကြမ်းဖက်မှု အဓီကတရားခံအစစ်က ဘယ်သူတွေလဲ ( ၃ )
ယခု မိတ္ထီလာမှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့အကြမ်းဖက်မှုနဲ့ ရခိုင်အရေးအခင်းမှာ ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်များ
ကို အကြမ်းဖက်သတ်ဖြတ် မီးရှို့ခဲ့တာနဲ့ တစ်ပုံစံတည်းပါပဲ။ တရားခံက တစ်အုပ်စုထဲပါ။ နေရာပဲ ကွဲလွဲတာပါ.
ပိုစ်မူရင်း – ၂၀၁၃ မတ်လ (၂၂)ရက်နေ့ တင်ခဲ့တဲ့လင့်ခ် – https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200841950756330&set=a.1630930618406.89980.1390856790&type=3&theater
This entry was posted on March 20, 2014 at 9:09 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.